1.Multi-pass ဆန်ဆန်စက်သည်တိကျမှန်ကန်သောဆန်ကိုဆောင်နိုင်သည်, ဒါဟာစီးပွားဖြစ်ဆန်ပိုမိုသင့်လျော်ပါတယ်.
2.ကြိုတင်နည်းပညာစီးဆင်းမှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစက်ကိရိယာများနှင့်အတူဆန်ကြိတ်စက်, ကျောက်ကိုဖယ်ရှားခြင်း, ကိုယ်ထည်, ဆန်စက်, ဆန်ဖြူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်, ပိုလန်, အရောင်ခွဲခြင်း, အရှည်ရွေးချယ်ရေး, အော်တိုအလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုး.
3.ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်တံဆိပ်ခတ်ထားသောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးစနစ်ဖြင့်ဆန်လုံးကြိတ်ခြင်းစီမံချက်, ခွံနှင့်ဖွဲနုစုဆောင်းပါ,effectual နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် - ဖော်ရွေ.
100T / D ဆန်ကြိတ်ခွဲမှုစီမံကိန်း၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စပါးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူ, ဆန်စက်လုပ်ငန်းတွင်အဆင့်မြင့်ဆန်စက်များပိုမိုလိုအပ်သည်. အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်စီမံကိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရွေးချယ်ကြသည်,အထူးသဖြင့်အချို့သောလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည် ,ထိုကဲ့သို့သောဖိလစ်ပိုင်,ထိုင်းနိုင်ငံ,နိုင်ဂျီးရီးယား,ကင်ညာစသည်တို့ဆန်စပါးကြိတ်ဆုံစီမံကိန်းသည်အဓိကအာရုံစိုက်သည့်ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်. ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်များတွင်အမျိုးမျိုးသောစွမ်းရည်ရှိသည်, အမျိုးအစား, နှင့်ပစ္စည်း. စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်, အသေးစားဆန်ကြိတ်ခွဲမှုစီမံကိန်းသည်ကြီးမားသောဆန်ကြိတ်ခွဲခြင်းစီမံကိန်းထက်များစွာစျေးသက်သာသည်. ဆန်စက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက်,ကောင်းမွန်သောဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်တတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းနှင့်ရောင်းချပြီးသော ၀ န်ဆောင်မှုအပေါ်အခြေခံသင့်သည်။ ဆန်စက်ကြိတ်စက်ကိရိယာစီမံကိန်းစီမံကိန်းပေးသွင်းသူကသင့်အားပိုမိုအကျိုးပြုနိုင်သည်။,ထို့အပြင်စီမံကိန်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အော်ပရေတာလေ့ကျင့်ရေးကိုထောက်ပံ့.
ဗစ်တိုးရီးယားဆန်စက်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုများမှတစ်ဆင့်အမျိုးမျိုးသောဆန်ကြိတ်ခွဲခြင်းစီမံကိန်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆန်စက်ပြည့်စုံနိုင်သည် ဆန်စက်စက်ရုံ 18t / နေ့မှ 100t / နေ့အထိ, ငါတို့တင်ပို့ပြီ ဆန်စက်စက် အာဖရိကရှိနိုင်ငံများစွာမှ, အာရှနှင့်တောင်အမေရိက, ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသုံးစွဲသူများနှင့်ဖောက်သည်များမှ VTN စီးရီးကြိတ်ခွဲမှုစီမံကိန်းကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်.
100T / D ဆန်ကြိတ်ခွဲမှုစီမံကိန်းကိုအသုံးပြုခြင်း
VTN100 အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဆန်ကြိတ်ဆုံစီမံကိန်းသည်မျိုးဆက်သစ်ဆန်စက်ကိရိယာဖြစ်သည် ,အရွက်ကဲ့သို့သောကြမ်းတမ်းသောအညစ်အကြေးများကိုသန့်ရှင်းရေးမှစပါးကုန်ကြမ်းများကိုပြုပြင်ခြင်း, ကောက်ရိုးနှင့်ပိုပြီး, ကျောက်နှင့်အခြားလေးလံသောအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားခြင်း, ထို့နောက်စပါးကိုကြမ်းတမ်းသောဆန်အဖြစ်သို့သွင်းလိုက်သည် , ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဆန်ကိုကြမ်းတမ်းသောဆန်ခွဲခြင်း,နောက်ဆုံးအဆင့်မှာအရည်အသွေးပြည့်ဆန်ကိုထုပ်ပိုးရန်အဆင့်အမျိုးမျိုးသို့အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်. ဤဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်အားလုံးသည်စပါးသန့်ရှင်းရေးမှအဖြူထုပ်ပိုးခြင်းအထိဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်အပြည့်အဝအော်တိုထိန်းချုပ်ထားသည်,သောဆန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည် 100 တစ်ရက် / တစ်ရက်.
ဤဆန်ကြိတ်ခွဲစက်များတွင်စပါးသန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာများပါ ၀ င်သည်,စိုင်းထီးဆိုင်,ဆန်နှင့်စပါးခွဲခြား,ဆန်စက်,grading.Main အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကြိုတင်သန့်စင်ပါဝင်သည်,de-stoner ဖုန်စုပ်စက်,စပါးခင်း,စပါးခွဲစက်,Emery လိပ်ဆန်စက်,ဆန်ဖြူစက်,နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသံလိုက် separator အဖြစ်အချို့သောအခြားလက်ထောက်ကိရိယာ,။,ရေပုံးဓာတ်လှေကား, လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု,အရောင် sorter , နှင့်ဆန်ဖြူထုပ်ပိုးစက်,ဆန်ဖွဲနုစနစ်စသည်တို့ကိုဤဆန်စက်စက်ကို linear နှင့်ဒေါင်လိုက်စီစဉ်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်. အသုံးပြုသူအမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်အရလည်းဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်. ဆန်ကြိတ်ခွဲမှုစီမံကိန်းသည်မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ဒေသများရှိပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများနှင့်သက်ဆိုင်သည်, လယ်ယာမြေ, စပါးကိုထောက်ပံ့ရေးဘူတာရုံ, စပါးကျီနှင့်စပါးကျီ.
တစ်နေ့လျှင်တန် ၁၀၀ တန်ဆန်ကြိတ်ခွဲမှုစီမံကိန်း
1.ဤဆန်ကြိတ်ခွဲမှုကိုဤစီမံကိန်းကဆန်စပါးရှည်နှင့်ဆန်တိုဆန်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်(ဆန်ပတ်ပတ်လည်), အရာဆန်ဖြူရောနှင့် parboiled ဆန်နှစ် ဦး စလုံးထုတ်လုပ်ရန်သင့်လျော်သည်, မြင့်မားသော output ကိုနှုန်းသည်, အနိမ့်ကျိုးနှုန်း.
2.VTN40 ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်များတွင်တုန်ခါမှုကြိုတင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် Aspirator de-stoner တပ်ဆင်ထားသည်, အညစ်အကြေးများနှင့်ကျောက်တုံးများဖယ်ရှားခြင်းအပေါ်ပိုမိုအသီး.
3.အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းနှင့်ရော်ဘာ roller များအပေါ်ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူဆန် hullers, ပိုမိုမြင့်မားအလိုအလျောက်, လည်ပတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်.
5.များသောအားဖြင့်ဖုန်မှုန့်များကိုစုဆောင်းရန်အိတ်အမျိုးအစားဖုန်စုပ်စက်ကိုအသုံးပြုပါ, အညစ်အကြေးများ, အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းခွံနှင့်ဖွဲ, သငျသညျကောင်းသောအလုပ်လုပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်ခဲ့ရမည်.
ဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းစက် VTN100 (100T / D)
(t / h) ပါဝါ
TQLZ125 တုန်ခါမှုကြိုတင်စက်သန့်ရှင်းစက် 12 0.55*2 1 အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရာ၌အသုံးပြုသည့် Pre-cleaner စက်
02 TQSX125 ဖုန်စုပ်စက်
ကျောက်တုံးများကိုလုံးဝဖယ်ရှားရာတွင်အသုံးပြုသော Aspirator Stoner စက်
5~ ၇ 11 1 စပါးခွံဖယ်ရှားခြင်းအတွက်စပါး huller စက်
04 MGCZ100 * 16 ဆွဲငင်အားစပါးခွဲစက် 4~61.5 1
MNMS25 ဆန်စက် 4~ ၅ 45 1 ဆန်ကြိတ်စက်ကိုအညိုရောင်ဆန်တွင်ဆီဖယ်ပေးသည်.
06 MMJP112 * စပါးလေးညှပ်စက် 4~ ၅ 1.1 1
8 1.57စပါးနှင့်ဆန်နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်
08 ဆိုင်ကလုန်း / / 3
/ / 1 ပြီးပြည့်စုံသောဆန်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုလျှပ်စစ်ကက်ဘိနက်တစ်ခုကထိန်းချုပ်ထားသည်, လည်ပတ်သောအခါအလွန်လွယ်ကူသောဖြစ်လာသည်.
10 သံမဏိ Operating ပလက်ဖောင်း / / 1
(စုဆောင်းဖုန်စနစ်နှင့်၎င်း၏ပိုက်အပါအဝင်) / / 1 /
12 တပ်ဆင်ခြင်းပစ္စည်းများ / / 1
ထွန်းစက် ,ဆန်အရောင် sorter စက် ,ထုပ်ပိုးစက် optional.It ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်လိုက်ဖက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်
100T / D ဆန်ကြိတ်ခွဲမှုစီမံကိန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ